Madaxweyne Farmaajo oo maanta safar ka ah Muqdisho | Dooxo Diaspora Forum - Golaha Qurbo Joogta Dooxa
Home Articles Madaxweyne Farmaajo oo maanta safar ka ah Muqdisho
Madaxweyne Farmaajo oo maanta safar ka ah Muqdisho
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu maanta oo Jimce ah uu socdaal ugu baxo dalka Jabuuti, xilli xaaladda siyaasadeed ee dalka ay kacsan tahay.
Madaxweynaha ayaa Jabuuti uga qeyb galaya shir madaxeedka ururka IGAD, kaasi oo looga hadlayo xaalada gobolka Tigray ee dalka Itoobiya, oo dhowaan ay qabsadeen ciidamada Abiy Ahmed ay dagaal ugala wareegeen ururka TPLF.
Shirkaas ayaa waxaa sidoo kale looga hadli doonaa ashtako ay Soomaaliya ka gudbisay Kenya, oo ay ku eedeysay inay faro-gelin ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya, iyo tallaabadii dhowaan dowladda Soomaaliya xiriirka ugu jartay Kenya.
Ra’iisul Wasaaraha Sudan Abdalla Hamdouk ayaa Axadii booqasho ku tagay Addis Ababa, waxaa uu sheegay in isaga iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya isku raaceen shir degdeg ah oo looga hadlayo dhibaatada ka jirta Tigray.
Sidoo kale, wasaaradda arrimaha dibedda Soomaaliya ayaa 13-kii bishan sheegtay “in ayada oo
Laga jawaabayo dhambaalka ka dhanka Kenya ee ay Dowladda Federaalka Soomaaliya u gudbisay Mudane Cabdalla Xamduuk, uu shir madaxeed ku qabanayo Jabuuti 20 December.”
Safarka Farmaajo ee Jabuuti ayaa imanaya ayada oo xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan Muqdisho ay qasan tahay, kadib markii ciidamada dowladda shalay hareereeyeen xaafadaha ay degan yihiin musharaxiinta mucaaradka.
Sidoo kale, ciidamada Amniga dowladda Soomaaliya ayaa xalay joojiyey xaflad lagu taageerayay Musharax Madaxweyne Mustaf Dhuxulow oo lagu qaban lahaa Hotelka Afriik oo ku yaalla agagaarka Isgoyska KM4.
Dowladda Soomaaliya ayaa u muuqata mid go’aansatay inay caburiso oo ay cadaadiso musharaxiinta, waxaana laga digayaa in tani ay horseedi karto isku dhacyo iyo magaalada ay ka dhacaan dagaallo.
Musharax Madaxweynaha Somaliya Mudane Inj-Cali Sheekh Cisman